Nahazo Zo Tsy Iharan’ny Lalàna ireo Miaramila Ambony Ao Yemen · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2013 3:39 GMT
Nilatsaka ihany nony farany ny didim-panjakana avy amin'ny prezidansa izay efa nandrasan'ireo Yemenita marobe, satria noesorin'ny filoha Yemenita Abdrabuh Mansur Hadi teo amin'ny toerany ny zanaky ny filoha teo aloha Ali Abdullah Saleh, lehiben'ny Fiambenana Repoblikana, tamin'ny 9 Aprily 2013, ary notendreny ho ambasadaoro any Emirà Arabo Mitambatra. Ny zana-dralahin'i Saleh, Ammar, filoha lefitry ny fitsikilovana kosa notendrena ho mpiandraiki-draharaha miaramila ao Ethiopia. Tareq Yahia, rahalahin'i Ammar, lehiben'ny Fiambenana ny Prezidansa, indray notendrena ho mpiandraiki-draharaha miaramila ao Alemaina. Noesorina tamin'ny toerany ihany koa ny Jeneraly Ali Muhsin Alahmar, lehilahy faharoa matanjaka indrindra nandritra ny fitondran'i Saleh ary notendrena ho mpanolotsainan'ny filoha eo amin'ny raharaha miaramila sy ny fiarovana. Fanamby lehibe ny fanesorana ireo fianakavian'i Saleh sy Ali Muhsin eo amin'ny fahefana amin'ny fandrafetana indray ny miaramila ao Yemen, ary sakana kosa ho an'ny governemanta tetezamita.
Sariitatr'i Carlos Latuff mampiseho an'i Saleh nivoaka tamin'ny 2011
Ibrahim Mothana nisioka am-pifaliana hoe:
@imothanaYemen: Ankehitriny, azontsika antsoina hoe fandrafetana indray ny rafitra miaramila izany! #Yemen
‏@imothanaYemen: Manontany tena hoe ao ahoana kosa ny ho setrin'ny didim-panjakana navoakan'ny filoha Hadi amin'ity indray mitoraka ity? #Yemen
Atiaf Alwazir naneho hevitra hoe:
@WomanfromYemen: Satria handao ny toerany ny Jeneraly Ali Mohsin, tsy midika izany fa tsy hanana “ambaidainy” ao #Yemen intsony izy; tafala tamin'ny toerany ihany koa i Saleh
@WomanfromYemen: Maro ireo olona no taitra tamin'ny didim-panjakana navoakan'ny prezidansa, ary tsy misy olona manombana ny amin'izay ho jeneraly vaovao na loza mety hitranga eo amin'ny fifandanjan'ny fitondrana #yemen
Farea Almuslimi nilaza hoe:
@almuslimi: Nataon'i Hadi ihany ny antony nifidianan'ireo #Yemenita an'hetsiny azy tamin'ny fifidianana; Mampihena ny loharanon'aretin'andoha eo amin'ny fiainan'izy ireo ampolony taona maro
@almuslimi: Mety ho lavorary raha alefa any ivelany ho diplomaty ihany koa i Ali Mohsen. Misalasala anefa aho raha hamela an'i #Hadi hanao izany i #KSA [Fanjakan'i Arabia Saodita]
Summer Nasser nisioka am-pitandremana hoe:
@SummerNasser: Nisy zavatra iray nianarako tamin'ny politikan'i Yemen: aza taitaitra amin-javatra. Fa tokony hijanona ho tsy mitanila.
@SummerNasser: Nahoana no faly ianareo rehetra? VOATERY handray fepetra ho an'ny firenena izy (Hadi). Toa mampiseho isika fa manao izany ho tombontsoantsika izy. #Yemen
@Afrahnasser: Tsy manasoa an'i #Yemen io didim-panjakana vaovao io. Ny ilain'ny Yemenita dia ny rariny. Azafady, nahoana no tsy ho faly amin'ny rariny i Yemen?!!
@Afrahnasser: Tsy tokony ho adinoina na havela mandrakizay ny rà latsaka tamin'ny fikomiana tao #Yemen. Tsy lazaina intsony ireo rà latsaka natrehintsika nandritra ny tantara.
Ny fihetseham-pon'ireo Yemenita:
Letta Tayler avy any HRW nisioka hoe:
@lettatayler: Fanovana tao #Yemen = tsimatimanota diplaomatika vaovao ho an'ireo iray foko amin'i #Saleh: Tareq nalefa any #Alemaina, Ahmed Ali nalefa any #UAE (Emirats arabo Mitambatra), Amar any #Ethiopia.
@lettatayler: Toa nahazo izay notadiaviny i Ali Mohsen ary niharan'ny fanovana toerana sahady tao #Yemen saingy misitraka ny hifaninana ho filoha avy any Emirà Arabo Mitambatra i Ahmed Ali?
Adam Baron, mpanao gazety tsy miankina ao Yemen nisioka:
@adammbaron: Maro ireo nahita fa nahazo ny tanam-pandresena tamin'ny fanovana toerana androany alina i Ali Mohsen; tafajanona ao amin'ny firenena izy, nahavonjy ny voninahiny. #yemen
@adammbaron: Izany, amin'ny alalan'ilay olo-malaza Aretha Franklin, manao asa mendrika amin'ny famintinana izay eritreretin'ny maro eto #Yemen amin'izao fotoana izao: http://www.youtube.com/watch?v=1HwF8VoyKU4 [Iza no mikendry an'iza]
Laura Kasinof nisioka hoe:
@kasinof: Efa nahazatra taloha ny fanendrena ireo fahavalon'i Saleh hiasa amin'ny masoivohon'i #Yemen any ivelany. Ankehitriny, mitsimbadika izany ka ry avy amin-dry Saleh no tendreny ho masoivoho
Mpanao gazety Elizabeth Dickinson nisioka hoe:
@dickinsonbeth: Manosika ny fomba klasika i Yemen ‘aza avela hihetsika ny fahavalonao amin'ny fandefasana azy hiasa any amin'ny masoivoho any ivelany’ http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/ousted-yemen-president-salehs-son-named-uae-envoy …
Mpanao gazety Iona Craig, monina ao Yemen, naneho hevitra hoe:
@ionacraig: Araka izany, fanovana miaramila be dia be nandritra ny alina. Nahoana no navoaka tamin'ny oran'i Etazonia ny didim-panjakana navoakan'ny Prezidensa? izany hoe tamin'ny misasak'alina. #justasking [mba manontany fotsiny]
Tsy vitan'ny misitraka ny tsy fisaziana ao an-toerana ihany ry avy amin-dry Saleh amin'izao fotoana izao fa misitraka ny tsy fisaziana ara-diplaomatika ihany koa. Misy ireo manontany tena hoe misolo tena ny filoha “voafidy” ve ireo diplaomaty vaovao ireo sa ny “mpitarika” ? Tahaka an'i Ali Muhsin, izay tafajanona ao Yemen, maro ireo miahiahy amin'ny andraikiny vaovao. Ary araka ny mahazatra, tamin'ny didim-panjakana navoakan'ny prezidansa tao Yemen, mifangaro ny tahotra arahina hafaliana. Misy ireo tsy mahafantatra mihitsy hoe iza no tena voakipily tanteraka ary iza no mbola tafajanona eo amin'ny fahefana, ho fantantsika miandalana eny izany. Ny sasany kosa manantena fotsiny fa amin'izao fanovana lehibe izao, hitoetra ny fandriampahalemana sy ny fahamarinan-toerana ao Yemen ho fanarenana indray ny toekareny.